Wafdi culus oo Ugaas Mustafe hormood u yahay oo Addis Ababa ku sugan – Xeernews24
Wafdi culus oo Ugaas Mustafe hormood u yahay oo Addis Ababa ku sugan
Waftii balaadhan oo u hogaminayo Ugaas Mustafe Mohamed Ibrahim Ugaaska Beesha ciise oo iskugu jira aqoonyahano,Siyaasiyiin iyo qaybo ka mid ah hal doorka gobolka Sitti ayaa maalmahanba ku sugan magaalada Addis sababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Socdaalka waftigan ayaa ku qotoma siddi shacabka ku dhibataysan galbeedka gobolka Sitti gaar ahaan sadexda magaalo ee kala aha;Cadayti,Cundhufo, iyo Garba ciise siddii xaal nabadeed loogu heli lahaa.
Waxay wafgu u gudbiyeen dawladda fedaraalka Itoobiya cabasho ka dhan ah maamulka Canfarta madaamo shacabka Soomaaliyeed ay Canfartu u adeegsaday awood ciidan oo xad dhaaf ah dad maati ah oo aan hubaysnayn dhibaato xoogleh loo gaystay.
Waa markii koobaad ee wafti miisaanka leh ay socdaal xal raadis ah ugu boqoolaan magaalada Addis Ababa tan iyo inti xilka laga tuuray maamulkii Cabdi Iley, Arintan ayaa waxay walwal iyo cabsi ku beertay is maamulka Canfarta maxaayeelay dhulka maaha dhul ay canfar degan tahay ee waa Soomaaliyeed laakiin Canfarta marar badan loogu eexday.
Dooda Canfarta ee ku salaysan dhul sheegashadda waa dood ku taagan luga booc ah oo indha cadays iyo jar iska xoornimo ah sababtuna waxay tahay wax sharci ah oo ay Canfartu keentay ma jirto goobaha lagu garnacdo oo aan ka ahayn in meelaha qaarkood magaalooyinka ay ku sheegeen in ay yihiin magac af canfar ah,laakiin waxay iloobeen in ay canfartu degan tahay magaalooyin leh magac Af Soomaali ah oo ay cidna ku haysan Sidda magaalooyinkan Hoos ku qoran;
iyo qaar kalo badan 3daa magaalo waxay sadaxduba leeyihiin magac Soomaaliyeed Soomaalina ma sheegato hadaba hadday Canfartu joojin waydu sheegashaadda aan micno buuran lahayn waxaa iman doonta maalin lagu qabsan doono 3da maagalo ee leh magaca Af Soomaaliga ah oo dhamaantood ku yaal duleedka magaalada Garba-ciise.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/Ugaas.jpg 360 480 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-02-26 00:31:572019-02-26 00:36:41Wafdi culus oo Ugaas Mustafe hormood u yahay oo Addis Ababa ku sugan
Muuse Biixi oo Warqad Dacwad u Gudbiyay Turkiga & Dalal kale oo ku biiraya... Oday dhaqmeedka SOOMAALIDA Kenya oo cadeeyey cidda iska leh dhul-badeedka ay...